अचम्मै भो ! नेपालको यो ठाउँमा दियो गोरुले दूध (हेर्नुहोस भिडियाे सहित) – " कञ्चनजंगा News "
अचम्मै भो ! नेपालको यो ठाउँमा दियो गोरुले दूध (हेर्नुहोस भिडियाे सहित)
No Comments on अचम्मै भो ! नेपालको यो ठाउँमा दियो गोरुले दूध (हेर्नुहोस भिडियाे सहित)
तामाङका अनुसार गोरुको अण्डकोश छेउमा रहेका थुनहरु बढेको हो । थुन बढेको केही समयपछि गोरुको थुनबाट दूधको थोपा खसेको थियो । त्यसपछि तामाङले दूध हो कि भनेर परीक्षण गरेपछि चारमध्ये २ वटा थुनहरुमा दूध आउने गरेको छ । तामाङका अनुसार अहिने हेर्न आउने सबैले शिवजीको वाहन भनेर पूजा गर्ने गरेका छन् ।
गोरुले दूध दिनु विज्ञानसम्मत नभएको वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाः शरदसिंह यादवले बताउनुभयो । यस्तो घटना हालसम्म आफूलाई थाहा नभएको र गोरुले दूध दिनु अनुसन्धानको विषय बनेको उहाँको भनाई छ । यसको बारेमा विस्तृत रुपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेपछि मात्र यही हो भन्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
← अर्घाखाँची बस दुर्घट*नामा भाग्यले बाँचे*का आमाछोरा ! → आज पोखरामा मतदान सुरु हुँदै गर्दा घट्यो डर*लाग्दो घ*टना, सर्वसाधारण त्र*सित